Munyengetero waHana Wekukumbira Mwanakomana Samueri | Zvidzidzo zveBhaibheri Zvevana
SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Basque Bassa (Cameroon) Bicol Bislama Boulou Bulgarian Catalan Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiKaren (S'gaw) ChiSutu (South Africa) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chol Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Galician Garifuna Georgian German Greek Guarani Gun Haitian Creole Hausa Herero Hiligaynon Hindi Hungarian Iban Ibinda Igbo Iloko Irish Isoko Italian Kabiye Kabuverdianu Kannada Kazakh Kekchi Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luganda Luo Macua Malagasy Malay Malayalam Mam Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mixe Moore Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuItaly Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ngabere Nigerian Pidgin Norwegian Nyungwe Nzema Okpe Ossetian Otetela Pangasinan Pidgin (Cameroon) Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Romanian Samoan Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tandroy Tarascan Telugu Thai Tojolabal Totonac Tshwa Tsonga Turkish Twi Tzotzil Ukrainian Uruund Valencian Venda Vezo Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Hana Anonyengetera Kuti Apiwe Mwanakomana
Mumwe muIsraeri ainzi Erikana aiva nemadzimai maviri, Hana naPenina, asi ainyanya kuda Hana. Penina aiva nevana vakawanda saka aigara achitsvinyira Hana nekuti ainge asina mwana. Gore negore, Erikana aienda nemhuri yake kuti vanonamata kutebhenekeri yaiva kuShiro. Rimwe zuva pavakanga vari ikoko, Erikana akaona kuti mudzimai wake waaida chaizvo Hana ainge asiri kufara. Akati kwaari: ‘Usachema kani Hana. Inga wani ndiripo. Ndinokuda.’
Pava paya, Hana akaenda ari ega kunonyengetera. Aingoramba achichema sezvaaikumbira kuti Jehovha amubatsire. Akavimbisa kuti: ‘Jehovha, kana mukandipa mwanakomana, ndichamupa kwamuri, uye achakushumirai kweupenyu hwake hwese.’
Mupristi Mukuru ainzi Eri akaona Hana achipfikura uye akabva afunga kuti akanga akadhakwa. Hana akamupindura achiti: ‘Aiwa, ishe wangu, handina kudhakwa. Ndine dambudziko rakakura chaizvo uye ndiri kuudza Jehovha nezvaro.’ Eri akabva aona kuti ainge amufungira zvisiri izvo, saka akati kuna Hana: ‘Dai Mwari akakupa zvauri kuda.’ Hana akatanga kunzwa zviri nani uye akabva aenda hake. Gore risati rapera, Hana akava nemwanakomana uye akamupa zita rekuti Samueri. Chimbofungidzira kufara kwakaita Hana!
Hana haana kukanganwa vimbiso yaakanga aita kuna Jehovha. Paakangorumura Samueri, Hana akabva amuendesa kutebhenekeri kuti anoshanda ikoko. Hana akaudza Eri kuti: ‘Uyu ndiye mukomana wandakanyengetera ndichikumbira. Ndamupa kuti ashandire Jehovha kweupenyu hwake hwese.’ Gore negore, Erikana naHana vaienda kunoona Samueri uye vaimuendesera jasi idzva risina maoko. Jehovha akazopa Hana vamwe vanakomana vatatu nevanasikana vaviri.
“Rambai muchikumbira, uye muchapiwa; rambai muchitsvaka, uye muchawana”​—Mateu 7:7
Mibvunzo: Nei Hana aishungurudzika? Jehovha akakomborera sei Hana?
1 Samueri 1:1–2:11, 18-21
Kutenda kwaHana muna Jehovha kwakamubatsira kuti atsungirire mamiriro ezvinhu aiita seasingatsungiririki.
Kadhi reBhaibheri raHana
Mwari akapindura munyengetero wakapiwa naHana achinyatsokumbira zvaaida.
Hana Akabatsira Samueri Kuti Ashumire Jehovha
Nyaya iyi inobatsira vana vane makore ari pakati pe3 ne6 kuti vadzidze nezvechipo chaipiwa Samueri naHana gore negore.
Nyaya ino inobatsira vana vari pakati pemakore 8 kusvika ku12 kuti varonge zvavangaita kuti vakurudzirewo mumwe munhu.